अनलाइनमा कल गर्ल खोज्दा एक युवक यसरी लुटिए ! – Ujyaalo Patrika
अतिरिक्त प्रहरी उपायुक्त (जोन–१) कुमार रणविजय सिंहले भने, ‘यस्तो देखिन्छ कि पी,डितले सन्दिग्ध व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरिसकेका छन् र उनीहरूसँग पहिले पनि काम गरिसकेका छन । यस विषयको अनुसन्धान भइरहेको छ र हामी यस बारे थप जानकारी संकलन गर्दैछौं ।’
यसरी लकडाउनका बीचमा क,ल गर्न खोज्नका लागि एजेन्ट खोजिरहेका उनी नराम्रोसँग फसेका हुन् । यदि तपाईं पनि यस्तो काम गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने कृपया एकपटक अवश्य ठन्डा दिमागले सोच्नुहोला । माथि उल्लेख गरिएको सबै रकम नेपाली रुपैयाँ अनुसार हो । यो कुरामा कोही पनि भ्रममा नपर्नुहोला ।
Previous एउटा होटल जहाँ सोधिन्छ तपाईं फ्रान्समा सुत्नुहुन्छ कि स्वीटजरल्याण्डमा ?
Next बैज्ञानिकहरुले अन्तरिक्षमै उमारे मुला (तस्वीरसहित)